Bangiyada Yurub oo la baaray kaydkooda - BBC Somali
Bangiyada Yurub oo la baaray kaydkooda
26 Oktoobar 2014
Image caption Bangiyada Yurub ayaa laga doonayaa inay haystaan lacag ku filan.
Masuuliyiinta dhaqaalaha ee Midowga Yurub, ayaa sheegay in labaatan iyo afar bangiyada ugu wayn Yurub ay ku guuldaraysteen baaris lagu sameeyay lacagta kaydka ee laga rabo inay haystaan, hadii ay timaato dhibaato dhaqaale adduunka. Saddex iyo toban ka mid ah bangiyada baarista lagu sameeyay ayaa u baahan inay helaan balaayiin dollar oo lacag cusub ah.
Masuuliyiinta kormeera bangiyada Yurub ayaa kormeeray in kabadan boqol iyo labaatan bangi. Waxay heleen in bangiyada ku guuldaraystay baaritaanka ay u baahan yihiin markii la isku daro ku dhawaad lacag dhan labaatan iyo shan bilyan oo dollar.
Bangiyada ku guuldaraystay baaritaanka lacagta kaydka ee ay haystaan ayaa loo qabtay laba toddobaad inay ku soo gudbiyaan qorshe ay ku kordhinayaan lacagta ay haystaan.
Wariyaha BBC ayaa sheegaya in bangiyada ugu badan ee baaritanka ku guuldaraystay inay yihiin bangiyada Talyaaniga.